Min Muqdisho illaa Kabul, muxuu Maraykanka ugu jabaa dagaal kasta ? | Gaaroodi News
Min Muqdisho illaa Kabul, muxuu Maraykanka ugu jabaa dagaal kasta ?
August 31, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Ka -bixitaankii Maraykanka ee Afgaanistaan ka dib, waxaa la isku dayayaa in la helo jawaabta su’aasha ah sababta dalkani isugu yaqaan inuu yahay waddanka ugu awoodda badan adduunka, oo leh ciidanka ugu casrisan, tiknoolajiyadda ugu horumarsan iyo ciidanka cirka ee ugu horumarsan, iyo in aanu ka adkaan karin Taalibaan.
Waxgaradka Mareykanka iyo adduunka kaleba ayaa la yaabban sababta Mareykanka uusan ugu guuleysan karin dagaal casri ah?
Su’aasha kale ee muhiimka ahina haddii bixitaanka ciidamada Mareykanka Talaadadan (31ka Ogosto) ay calaamad u noqon doonto soo afjaridda ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Afgaanistaan, gaar ahaan xilli Shiinaha iyo Ruushku ay horay ugu sii ruqaansanayaan gobolka.
Qaar ka mid dadka la dhacsan siyaasadda debedda ee Maraykanka nayaa ku dooda in Ameerika ay guulo badan ka soo hoysay Afghanistan iyo Ciraaq.
Laakiin waxaa jira is -afgarad ka dhex jira Mareykanka oo ah in Mareykanku ku guuldarreystay inuu xididada u siibo argagixisada Afghanistan, Syria, Iraq iyo Yemen.
Guusha dagaalka Taliban iyo ku soo noqoshada awoodda ayaa iyana ah caddaynta ugu weyn ee fashilka Ameerika.
Markaan fiirino taariikhda, Ameerika waxay ku guuleysatay ku dhawaad dhammaan dagaalladii waaweynaa ilaa 1945, laakiin ilaa 1945 wixii ka danbeeyey, Ameerika waxay gaadhay guul macno leh dagaalo aad u yar.
Mareykanku wuxuu galay shan dagaal oo waaweyn tan iyo 1945 – Kuuriya, Fiyatnaam, Dagaalkii Gacanka, Ciraaq iyo Afgaanistaan, iyo dhowr dagaal oo yaryar, oo ay ku jiraan kii Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya.
Marka laga reebo Dagaalkii Gacanka ee 1991, oo lagu tilmaami karo guul, Ameerika waxa ay guuldarraysatay dhammaan dagaalladii kale ee ay gashay.
Carter Malkasian wuxuu sanado badan ku qaatay Afgaanistaan isagoo u shaqeynayay maamulka Mareykanka, waxa uu qoray buug ku salaysan khibraddiiisa oo u bixiyey ‘The American War in Afghanistan – A History’, oo la daabacay 1dii Luulyo
Maxay dagaal kasta u jabaan?
Buuggani, wuxuu ka iftiiminayaa dhinac xiiso leh. Waxay sheegaan in dagaalladii dhacay 1945 ka hor ay ahaayeen kuwo dhex maray waddamo, Ameerika had iyo jeer way ku guuleysataa dagaalladaas.
“Laakiin waxay lumisay dhammaan dagaalladii xilligan cusub halkaas oo dagaalyahannadu ay yihiin fallaagada maxalliga ah, oo ka itaal roon xagga awoodda milateri laakiin ka dhiirran oo ka go’naansho badan.”
Guuldarradu way ka duwan tahay, sida ay askarta Maraykanku ugu soo noqdeen xaalad gargaar la’aan ah Benghazi, Soomaaliya, Saigon iyo hadda Kabul oo ka sii dhigaysa guuldarada Mareykanka ceeb ka sii badan tii hore.
Khubaradu waxay sheegaan inay jiraan sababo badan oo guuldarradaas keena, taas oo ay muhiim u tahay inaan la fahmin dhaqanka deegaanka.
Dominic Tierney, oo ah khabiir ku xeel dheer siyaasadda arrimaha dibedda Mareykanka, ahna bare wax ka dhiga Kuliyadda Swarthmore, ayaa wareysi email ah oo uu siiyay BBC Hindi ku yirdh, “Dagaallada sida Afgaanistaan, Ciraaq, Suuriya iyo Liibiya waa dagaallo sokeeye oo aad u waaweyn. gaar ahaan marka dal sida Ameerika oo kale uusan ka warqabin dhaqanka maxalliga ah ee uu la dagaallamo cadow ka aqoon badan kana ayna ka go’an tahay in uu is difaaco “.
Waa maxay casharka Maraykanku ka bartay guuldarooyinkan?
Hoggaanka Maraykanku waxba kama ay baran Saigon, Vietnam. Maraykanka sannadkii 1993kii, tallaabo militari oo laga qaaday gudaha Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay mar kale ku celiyeen khaladkii hore oo kale.
Aragtida askar Maraykan ah oo dhintay oo lagu jiidayo waddooyinka Muqdisho ayaa dunida oo dhan laga cambaareeyay. Maraykanku wuu cadhooday markay arkeen aragtidan. Kuwo badan ayaa caadifad noqday. Tani waxay ahayd isbeddel ku yimid habkii Ameerika u aragtay Afrika.
Bishii Oktoobar 1993kii, ciidamo Maraykan ah ayaa weerar ba’an ku qaaday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeedadoodu waxay ahayd inay soo qabtaan dagaal oogihii Xoogga badnaa ee Soomaaliyeed, Jeneraal Maxamed Faarax Ceydiid, iyo xulafadiisii ​​muhiimka ahaa, laakiin ciidamada Mareykanka waxay iska caabin xooggan kala kulmeen maleeshiyadaas.
Laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah oo American Black Hawk ayaa la soo riday. 18 Maraykan ah iyo laba askari oo UN ah ayaa la dilay. Waqtigaas Mareykanku wuxuu horkacayay hawlgal Qaramada Midoobay ah oo lagu soo afjarayay dagaallada sokeeye iyo macluushii ka taagnayd Soomaaliya.
Lix bilood gudahood, Mareykanku wuxuu ciidamadiisii ​​kala baxay Soomaaliya, fashilka hawshan wuxuu Mareykanka ka digay faragelintiisa dhibaatooyinka Afrika.
Professor Dominic Tierney wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaabo badan oo la barto. Sida uu sheegay, casharka ugu muhiimsan ayaa ah “Ha bilaabin dagaal labaad inta uusan dagaalka hore dhammaan. Ha bilaabin dagaal akhlaaqda iyo xamaasadda diimeed kacsan tahay, hana diidin haddii ay jirto fursad aad lagu wadahadalo. Samee hadafyo aad gaadhi karto. Xusuusnow Dagaalladu way ka adag yihiin dhammaadkooda in la bilaabaa”.